musha Vaimbi Bio Shania Twain Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Yedu Shania Twain Biography inokuudza Chokwadi nezve Hudiki hwake Nyaya, Hupenyu hwepakutanga, Vabereki - Clarence Edward (Baba), Sharon Morrison (Amai), Mhuri, Varume, Hupenyu Hwega, Mararamiro, uye Net yakakosha.
Muchidimbu, tinokupa iwe ne-yakadzama ongororo yehupenyu hwaShania Twain. Yedu nyaya inotanga kubva pamazuva ake ekutanga kusvika paakatanga kuve nemukurumbira mune rake basa remimhanzi.
Kuti whet yako autobiography chishuwo, heino mbereko yake kune mukurumbira gallery. Iyo inoratidza chidimbu chakakwana cheShania Twain's Bio.
Hupenyu uye Kukwira kwaShania Twain. Tarisa iye Biography kufambira mberi kubva kumucheche kusvika kune akabudirira mukurumbira.
Ehe, isu tese tinoziva kuti ndiye mumwe weanonyanya kutengesa echikadzi maartist mumhanzi yenyika.
Nekudaro, vashoma chete ndivo vakaverenga muchidimbu vhezheni yeShania Twain Hupenyu Nyaya, iyo inonakidza kwazvo. Pasina imwezve ado, ngatitangei.
Shania Twain Yevacheche Nyaya:
Kune vatangi veBiography, iye ane zita remadunhurirwa rekuti "Mambokadzi weNyika Pop". Eillen Shania Twain OC akazvarwa pazuva re28th raAugust 1965 kuna amai vake, Sharon Morrison, uye baba, Clarence Edward, kuWindsor, Canada.
Ndiye wechipiri pavasikana vatatu, akazvarwa mumubatanidzwa pakati pevabereki vake chaivo vanoratidzwa pazasi.
Iyo yakanaka nguva yakagovaniswa pakati paamai vaTwain nababa vokurera.
Shania paakanga aine makore maviri, vabereki vake vakarambana, uye amai vake vakatamira kuTimmins, Ontario, nevanasikana vavo. Iyi nhamo yese yakatora mutero pamusikana mudiki uye ikamuita kuti arasikirwe nehupenyu muhupenyu hwevanhu.
Nekudaro, kuvapo kwevanin'ina vake naamai kwakaita kuti hudiki hwake hunakidze uye husasurukirwe.
Iye mudiki munyori wenziyo akarererwa naJill naCarrie Ann (hanzvadzi dzake) pamwe naMark Twain (hama yake yekurera). Pamwe chete, ivo vairarama hupenyu hwakachengetedzwa vachidzivirira kutarisisa.
Kare kumashure, amai vavo vakaroorwazve naJerry Twain, uyo akatora vana vake vasikana uye akachinja zita ravo rekuti Twain.
Ona kuti muvaraidzi nevanin'ina vake vanopfeka sei kunyemwerera kwakanaka pazviso zvavo zvidiki. '
Kunyangwe mumusha wake mutsva, munyori wenziyo haana kuwana rugare rwakakwana rwepfungwa. Pane mazuva apo Twain nehanzvadzi dzake vaipupurira amai vake nababa vokurera vachirwa zvinotyisa.
Situation yese yanga yakanyanya kumuwandira kubata. Kunyangwe zvakadaro, zvese zvaaifunga nezvazvo kwaive kupona pamwe nevanin'ina vake.
Shania Twain Mhuri Yemhuri:
Muimbi ari kuuya akakurira mumusha une hurombo. Amai vake vakaona zvichinetsa kuriritira mhuri mushure mekurambana.
Dzimwe nguva, varombo Twain nevanin'ina vake vanogara zuva rese vasina kudya. Amai vake vaifanira kutora mabasa akati wandei ekuraramisa vana vavo.
Kunyange mushure mokunge varoorazve naJerry Twain (mushandi wemasango), vakanga vachiri kuwana zvakaoma kurarama semhuri dzepakati.
Pasinei nehurombo hwavo, mauto aTwain akapedza mamwe ekupera kwevhiki uye mazhizha panzvimbo yeMattagami iri pedyo.
Shania Twain Mhuri Kubva:
Sezvineiwo, ane vanababa vaviri vane dzinza rakasiyana zvachose. Baba vake vekumubereka, Clarence Edward, vanobva kuFrench neIrish.
Kune rimwe divi, Jerry Twain (baba vake vekurera) ndewedzinza raOjibway, rinova dzinza rekuNorth America reIndia uye rinonyanya kugara muOntario, Canada.
Iye anonyanya kuvimba nababa vake vokurera zvekuti zita rake rakanyoreswa mumutsara wake weOjibway.
Kubva kuna mai vake Vokutanga, iye anobva kuIrish. Zvisinei, mamwe emhuri yake Midzi Midzi inogona zvakare kuteedzerwa pasi kune veNative American dzinza.
Shania Twain Dzidzo:
Unoziva here?… Twain aive nemakore masere paakatanga kuimba kumabhawa kubatsira kuvharira mhuri yake zvikwereti. Aiwanzoimba pakati pehusiku na8 mangwanani kuti awane $ 1 yebasa rake.
Mushure mekushanda husiku hwese, aidzokera kumba kuti aite kuchikoro kwayedza.
Nezve ake edzidzo mamiriro, Twain akapinda Timmins High uye Vocational Chikoro. Ndichiri kuchikoro, akadzidza nesimba uye akamupa kutarisisa kumimhanzi.
Semunhu mutsva, akazova muimbi kune rimwe bhendi remuno rakadaidzwa Longshot, iyo yakafukidza mimhanzi yepamusoro makumi mana mukutanga kwema40.
Ndiani angadai akatenda kuti mutsva kubva kuLongshot bhendi achagadzira chinoshamisa chakadai muindasitiri yevaraidzo?
Shania Twain Zvekutanga Basa Rehupenyu Hupenyu:
Mushure mechikoro, munyori wenziyo anowanzo shanda nebhizinesi rababa vake rekusima miti. Iwe unogona kufungidzira kuti anowana mufaro mukushandisa imwe nguva yakanyarara musango negitare yake iye achinyora pasi dzimwe nziyo.
Chekupedzisira, Twain akapedza kudzidza muna 1983 kubva kuTimmins High uye Vocational Chikoro uye akangotarisana nekutsvaga basa mumimhanzi.
Mufananidzo unokanda wekupedza kudzidza kwaTwain kubva kuTimmins High uye chikoro cheVocational.
Zvinosuruvarisa, mazuva ake neLongshot akapera seboka rakapwanya. Mushure mezvo, akabatana nebhendi nyowani - Flirt - uye akatora chinhano mukushanya kwavo kwemimhanzi kutenderera Ontario.
Sokunge mafambiro ake anga asina kukwana, Twain akatora zvidzidzo zvekuimba kubva kumurairidzi Ian Garrett, uye nekudzoka, akachenesa imba yake kubhadhara.
Shania Twain Biography - Mugwagwa kune Mukurumbira Nyaya:
Paakatanga kukwezva kuzivikanwa kubva kuna maDJ ane mukurumbira saStan Campbell, claw yerufu yakadzora kumhanya kwekubudirira kwake.
MunaNovember 1987, Twain akarasikirwa nevabereki vake mutsaona yemotokari. Iyi nhamo yakakanganisa kubudirira kwake pabasa sezvo 22-gore-rekare aifanira kushandisa simba rake rese kusimudza vanin'ina vake.
Muna 1993 Twain akazoburitsa dambarefu redamba redamba rake rakanzi “Shania Twain“, Izvo zvakamupa budiriro yaaishuvira muindasitiri yevaraidzo.
Iyo album yakatadza kuita yakakosha kutengesa pakuburitswa kwayo. Nekudaro, iyo yakagamuchira zvakanaka kuongororwa kubva kuvatsoropodzi uye yakarova kwete. 67 muU.S. Country Albums Chati.
Muimbi wedhodhi studio album - Shania Twain.
Shania Twain Bio - Kubudirira Nhau:
Sezvineiwo, mimhanzi yake yakakwezva mugadziri wedombo; Robert John ”Mutt” Lange, uyo akazvipira kubatana naye mukunyora rwiyo uye mukugadzira.
Tese pamwe chete, Twain naLange vakanyora yavo yechipiri studio studio yakanzi "Mukadzi ari mandiri“Ndokuiburitsa muna Kukadzi 1995. Nerombo parutivi pavo, dambarefu rakahwina mubairo weGrammy yenyaya dzakanakisa dambarefu remunyika.
Mazwi haakwanise kutsanangura mufaro waakanzwa paakakunda mubairo weGrammy.
Nekukurumidza kumberi kunguva yekunyora iyi Bio, Shania Twain akaimba pamwe chete nevekare maartist senge Dolly Parton.
Ma Albums ake akawanda nema singles akamuwanira mibairo yakawanda muhupenyu hwake hwebasa. Vamwe vose, sezvavanotaura, inhoroondo.
Shania Twain Murume:
Mushure mekuzviitira zita mumimhanzi yenyika, zvinongova zvakanaka kuti vateveri vabvunze mibvunzo nezve hupenyu hwake hwerudo.
Kutanga, Twain akatanga kudanana nemugadziri wake (John Robert Mutt Lange) kwenguva pfupi vasati varoora musi wa28 Zvita 1993. Kuroora kwavo kwakapa kuberekwa kwemwanakomana - Eja Lange.
Mufananidzo usingawanzoitika waTwain uye wake wekutanga wepamoyo. Zvinosuruvarisa, yavo yerudo nyaya haina kugara zvachose.
Zvinosuruvarisa, vaviri vakanaka vakaisa chikumbiro chekurambana mushure mekunge Twain aziva kuti murume wake aifambidzana neshamwari yake - Marie-Anne Thiebaud.
Makore avo 17 ekuroorana akapera zviri pamutemo mushure mekunge vapedzisa kurambana kwavo munaJune 2010.
Inenge mwedzi mishoma mushure mekuparadzaniswa kwake, Twain akaroora Frederic Thiebaud (aimbova murume waMarie-Anne).
Varoorani vatsva vakabuda pamisi mizhinji uye vakapedzisa kusunga iro banga pazuva re1 Ndira 2011 muRincon, Puerto Rico. Sezvineiwo, Twain anotsanangura muchato wake naFrederic sechiitiko chakamonyoroka.
Sangana nemurume wake wechipiri uye akavimbika, Frederic Thiebaud. Vimba neni, vanotaridzika pamwe chete.
Shania Twain Mhuri Chokwadi:
Sezvambotaurwa, muimbi anobva kumhuri yevarombo. Zvisinei, nhengo dzemhuri yake dzakatsigira kukwira kwake zvishoma nezvishoma mukurumbira neimwe nzira kana imwe.
Nekudaro, isu tinokuunzira iwe chokwadi nezve baba vake, amai, uye vanun'una muchikamu chino.
Nezve baba vaShania Twain:
Clarence Edward ndiye baba vekubereka veteran muimbi. Zvinosuruvarisa, akanga asiri chikamu chehupenyu hwake panguva yaaida zvakanyanya.
Sezvambotaurwa, Clarence akarambana naamai vaTwain paaiva nemakore 2. Izvi zvakaita kuti amai vake varoorezve baba vake vokurera, Jerry Twain.
Sangana nababa vaShania Twain, Clarence Edward. Zvinosuruvarisa, kusavapo kwake kubva pahupenyu hwake ndicho chipingaidzo chekutanga chaakatarisana nacho.
Unoziva here?… Nyanzvi yakaburitsa pachena kuti yaigara ichireva Jerry sababa vake. Akave ari mutsigiro mukuru wababa waakambove nawo muHupenyu Hwake Hupenyu. Nekudaro, kwaizove kurova kumeso kwake kana akamudana sa STEPDAD wake.
Nezve Amai vaShania Twain:
Mazwi haakwanise kutsanangura kemesitiri iripo pakati paTwain naSharon Morrison (amai vake). Sezvaitarisirwa, Sharon murombo akashanda nesimba kuti achengete vanasikana vake mushure mekurambana naClarence.
Chakanga chiri chishuwo chake chisinga rerere kurera vasikana vake nenzira kwayo zvakamutungamira kuti aroore zvakare Jerry. Zvinosuruvarisa, iye nemurume wake wechipiri havana kurarama kwenguva yakakwana kuti vafarire muchero webasa ravo sezvo vakafa mutsaona yemotokari.
Nezve Shania Twain's Siblings:
Muimbi ane mukurumbira ane hanzvadzi mbiri dzekuzvarwa, dzinoti; Jill naCarrie Ann Twain. Zvakare, iye ane mudiki-nhanho-hama (Maka Twain) kubva kuna amai vake vanotevera muchato.
Mushure mekufa kwevabereki vavo, Twain akatora mabasa ekurera vanin'ina vake.
Ona mafambiro aanoita achivimba nehanzvadzi dzake. Hongu, anozviti iye nerombo rakanaka kuva nevanin'ina vake.
Sezviri pachena, iyo superstar yaivewo nehama yakagamuchirwa nababa vayo vamai naamai. Zita rake anonzi Darryl Twain, uye ndiye muzukuru mupenyu waJerry.
Darryl akatanga kugara naTwain nevamwe vese vanin'ina vake mushure mekufa kwamai vake.
About Shania Twain's Hama:
Achienderera mberi kumadzitateguru ake, ambuya vake baba vaMaria Régina Benson, apo sekuru vake baba vaHarold Edwards.
Saizvozvowo, vanasekuru naamai vaTwain vaive George Bertram Morrison naEileen Pearce. Pave pasina ruzivo nezve babamunini vake natete.
Chii chinoita kuti Mambokadzi weNyika Pop ave mukobvu?… Kutanga, Twain's Persona isanganiswa yeVirgo zodiac maitiro. Iye ndomumwe wevanyaradzi vane mutsa waungazosangana navo.
Kunze kwekuyedza kwake kwekuimba, Twain anoda kutamba mutambo weping pong. Unogona here kuenzanisa netarenda rake mutenesi mushure mekuona vhidhiyo pazasi?
Zvinokufadza iwe kuziva kuti chimwe chezvaanofarira chinosanganisirawo kukwira bhiza. Twain anopota achipedza imwe yenguva yake yekuzorora naMimi (bhiza rake).
Sezvineiwo, akatasva bhiza rake kuburikidza neLas Vegas Kune Nyowani Nyowani muna Ndira 2020.
Shania Twain Mararamiro:
Nekuda kwekuzvipira kwake muindasitiri yevaraidzo, Twain akaunganidza mukurumbira neumbozha.
Naiye anofungidzirwa Net Kukosha kwemamirioni mazana mana emadhora (400 Stats), atenga mota dzakasiyana dzekunze, kusanganisira 2021 Shelby GT-1968KR, Jaguar E-Type, 500s Chevy Corvette, Chevy Camaro, Dodge Ram 1970, Volvo S2500 T60, uye Chevy Bel Air.
Kuona pane kumwe kwekukwirwa kwake kwoumbozha.
Zvakare, iyo nyika-pop muimbi anogara nemurume wake muCorseaux yakatarisana neLake Geneva, Switzerland. Hupenyu hwake hwoumbozha hwakamukurudzira kuti atenge dzimba zhinji dzinodhura muLas Vegas, Bahamas, neOntario.
Tarisa uone imba yake yakanaka muBahamas.
Shania Twain Untold Chokwadi:
Kuti tikubatsire kuti unzwisise zvizere nezve Biography yake, takagadzirira zvimwe zvinonakidza nezve muimbi muchikamu chiri pazasi.
Chitendero cheShania Twain:
Munyori wenziyo ane mukurumbira aive akazvipira kuna Sant Mat. Uku ndiko kufamba kwemweya muIndia subcontinent iyo yakatanga muzana ramakore regumi nematatu CE uye inonyanya kubva mukufungisisa.
Akatora chinamato cheSant Mat paakanga achiri akaroorwa nemurume wake wekutanga.
Shania Twain Lyme Chirwere:
In 2003, Twain akarasa izwi rake mushure mekunge aonekwa aine chirwere cheLyme, iyo yakagadzira kumwe kukuvara kwetsinga kutambo dzake dzenzwi.
Kunyanya zvakadaro, yakava kutyisidzira kumumhanzi basa sezvo aitya kuti aisazomboimba zvakare. Zvakamutorera makore mazhinji ekutsungirira nekuvhiyiwa asati agonesazve.
Shania Twain Mhuka:
Munyori wenziyo weCanada anokweverwa kumhuka kubvira achiri mudiki. Zvakare, Twain mutsigiri wePETA (People for the Ethical Treatment of Animals).
Hazvishamisi kuti akachengeta dzinenge nhatu mhuka dzinovaraidza mumba make. Zvinosanganisira; Melody (imbwa), Skipper (katsi), uye bhiza rake rinoyevedza - Mimi.
Anowanzofarira muimbi kune zvipfuwo zvake. Zvinoita kunge bhiza rake rinonakidzwa nerwiyo rwake zvakanyanya.
Chakavanzika Kune Iye Mudiki Asingadaviriki Anotaridzika:
Sezvineiwo, Twain aburitsa zvakavanzika zvinokatyamadza kuseri kwemeso ake ehudiki. Pakati peimwe yehurukuro dzake na WELLANDGOOD, muimbi akaburitsa pachena kuti anotanga mangwanani ake nesmoothie (yakagadzirwa nekokonati mvura, avocado, uye apuro).
Pamusoro peizvozvo, anosanganisa shuga, imwe yemafuta emuorivhi kana chero kirimu yechiso, pamwe neakawanda zvishoma mvura inodziya, uye zvinyoro nyoro kumeso kwake.
Shania Twain Biography Pfupiso:
Tafura iripazasi inopfupikisa yevakadzi superstar's Yevacheche Nyaya uye Biography Chokwadi.
Zita rizere: Eillen Shania Twain OC
Zita rekudanwa: Mambokadzi weNyika Pop
Nzvimbo yekuzvarirwa: Windsor, Canada
Baba Chaivo: Clarence Edward
Amai: Sharon Morrison
Baba vokurera: Jerry Twain
Vanun'una: Jill naCarrie Ann (hanzvadzi)
Mark Twain (mukwambo)
Varume: John Robert Mutt Lange (aimbova murume)
Frederic Thiebaud (murume sa2021)
Net Worth: $ 400 mamirioni (2021 Stats)
Zvipfuwo: Melody (imbwa)
Hobbies: kutamba Ping Pong
kukwirira: 1.63 m (mashanu tsoka 5 inches)
Iyo Hupenyu Hupenyu hweTwain inokurudzira kune vanhu vazhinji vakapfuura nezviitiko zvakafanana. Zviripachena, akave nemiedzo yakawanda inorwadza asi akavakunda netarisiro huru yekuve muimbi anoremekedzwa - Ehe, akazviita.
Zvinotofanirwa kuti tirumbidze kuedza kusina kukodzera kwaamai vake mukutsigira zviroto zvake. Kunyangwe paine hurombo hwemari hwemhuri yake, iye akapedzisira ave kuita kuti vabereki vake nevanin'ina vake vadade.
Chikwata chedu paChildhoodbiography chinokutendai nekuverenga nyaya yaShania Twain yehudiki uye nekumwe kupatsanurwa kwebio yake.